Ics Izazi ezilungileyo ngomnxeba 100% Impumelelo ngaphandle kweKhabhinethi!
Xa sicacile ukuba into esiyifunayo kukwazi ukuba ikamva lethu lisizisela ntoni, kuya kufuneka siye kudibana nomfundi olungileyo okanye ugqirha fowuna. Abanye abantu bakhetha le ndlela ngenxa yokungazichazi esinika yona kunye nokugcina okuyimfihlo okukhulu, kuba asibonisi ubuso bethu kumfundi we-tarot.
1 Zeziphi izangoma ezingcono?
2 Iitarotists kunye nababona ngefowuni ngaphandle kwekhabhinethi yezoqoqosho
2.1 Ngaba i-Tarot Tarot okanye i-Clairvoyance kuThethwano ingcono?
Zeziphi izangoma ezingcono?
[iarbital_cluster tag = »18 ″ order =» DESC »]
Oku kuhle, kodwa kuya kufuneka siqiniseke nge-100% ukuba sithetha nengcali yokwenyani ye-tarot kunye ne-clairvoyance. Yiyo loo nto kubalulekile ukuyazi ngoobani oogqirha abalungileyo emnxebeni, ngoobani amagama abo, kwaye ngubani amanani abo ukuze sikwazi ukubabuza ngekamva lethu ngaphandle kwengxaki.
Ukwazi ukuba i-clairvoyant ilungile kwaye ithembekile, kubalulekile ukuba siqale sijonge izimvo ezikwi-intanethi, ngokubeka nje igama lakhe, okanye iwebhusayithi yakhe kwi-intanethi, kodwa kwiimeko ezininzi zihlala zingqina bobuxoki ezihlawulwa ngabafundi beetarot abanye abasebenzisi ukukunika uluvo oluqinisekileyo.
Kungenxa yoko le nto singena Ityhubhu.line, ngaphandle kokubonelela ngezixhobo ezisimahla, sikwaqwalasele ubungcali kumashishiniSiyazi ukuba i-tarot kunye ne-clairvoyance kufuneka ihlale iyinto yokwenyani kwaye inzima, ke ngoko sikubonisa uthotho lwee-clairvoyants ezilungileyo ngefowuni, ukuze ubabize ngokhuseleko olupheleleyo noxolo. Iya kuphendula imibuzo ngaphandle kweengxaki, kunye nedatha ethile, kunye nemihla ethile.
Olona khetho lufanelekileyo esincomela kulo USara ukhozi, yenye yezona zinto zibalaseleyo kwicandelo lazo, eneereferensi ezilungileyo kakhulu kwimibuzo yefowuni. Iziphumo zakho zimnandi.
Iitarotists kunye nababona ngefowuni ngaphandle kwekhabhinethi yezoqoqosho
USara Aguilas uhamba ngendlela emnandi, naye uyayenza ngokobuqu ngomnxeba, kwaye kwangaxeshanye ngaphandle kwekhabhinethi, nguye kuphela oza kuzimasa, ngaphandle kwabalamli esiphakathini.
Uxhomekeke kwi-Astrology ukuqikelela ikamva kwaye uphendule imibuzo, unxibelelana nawe ngokubhula ngaphandle kokusebenzisa amakhadi e-tarot.
Ngaba uyazi ukuba oosiyazi abalungileyo akufuneki bakwazi ngokweenkcukacha okanye bakubuze imibuzo emininzi ukuze bazi ikamva lakho, elangoku nelizayo? Yonke indlela yakho ebomini sele uyibhalile. Kwaye kuphela ngabaqeqeshi bokuzalwa kwe-DON kuphela abaya kuyazi indlela yokucacisa kwaye banxibelelane nawe.
Le yeyona ndlela ilungileyo yesiqinisekiso sokwazi ukuba uthetha nomfundi wokwenene we-tarot ngomnxeba, okanye ngobuqhetseba, ukwazi izinto zokuqala zobomi bakho ngaphandle kokuzibuza nantoni na.
Enye ye ezona zilungileyo zihamba ngomnxeba USara Aguilas kuphela kwesithethi saseSpain, sisincomo sethu kuphela njengoko esenza konke oku kungasentla. Uya kujonga kwifowuni yokuqala ukuba konke oku kuyinyani.
Ngaba i-Tarot Tarot okanye i-Clairvoyance kuThethwano ingcono?
Kukhethwe ngokuzithandela ukuba ubomi buya endlwini yakho, okanye kuya kufuneka uye kwindlu egunyazisiweyo ukuze wenze uthethathethwano, okanye ukwazi ukubiza umnxeba kwaye umfundi we-tarot abekho kuwe. Ngendlela yethu yokucinga, ngefowuni uzigcinela imithambo-luvo yokuya endlwini yomnye umntu, kwaye kufuneka ujonge "umntu ongamaziyo" ebusweni oza kwazi yonke into ngawe. (Nokuba uyayithanda okanye awuyithandi, emntwini, uyoyika.)
Ngamanye amaxesha asiyiboni, kodwa xa oosiyazi besibona ngobuqu, bayahlalutya ukuba sinovalo, sixhalabile, sidandathekile, ngenxa yendlela esijongeka ngayo, sihamba, sithetha, kwaye imeko yethu yomzimba.
Ukuba yonke le nto siyigcina buqu, sidlala ngenzuzo, ngale ndlela siya kuba nesiqinisekiso sokuba ukuba imboni iyakufumana ngaphandle kokucela kuthi, iya kuba ilungile ngenene, kuba iyenzile ingakhange isibone. Ingqondo elungileyo iya kuyenza.
Ke ukusukela ngoku sisigqibo sakho sokukhetha apho ufuna khona thetha nomlomo, ukuba ngokubonisana okanye ngomnxeba. Ngokwam, ukuba ndinganikwa ukhetho phakathi kwezinto ezimbini onokukhetha kuzo, ndingakhetha isandla sokuqala fowuna. Ngale ndlela, ndigcina imfihlo yam, ngaphandle kokoyika ukuba umntu endimaziyo uyakundibona ndingena nakuluphi na uthethwano.
Ungalibali ukuba zonke izichazi esizicebisayo ngaphandle kwekhabinethi, ukuze kube lula kuwe ukuba uthethe nomnye wabo.